SOOMAALIYA: “Dhaawaca gocashada dhiig joojin ha loo raadiyo (Maxaa kala heysta Sheekh Umal iyo qoraaga Cabdi Siciid?!!” | Radiomaanta.com
You are here » Radiomaanta.com » Faallo » SOOMAALIYA: “Dhaawaca gocashada dhiig joojin ha loo raadiyo (Maxaa kala heysta Sheekh Umal iyo qoraaga Cabdi Siciid?!!”
Posted By admin On 2nd October, 2014. Under Faallo, Wararka |
Buugga lagu magacaabo “Xadka ridada maxaa ka run ah?” oo uu soo saaray qoraaga Soomaaliyeed ee Cabdi Siciid Cabdi Ismaaciil ayaa waxaa ka dhashay dood culus kaddib markii uu si kulul uga hadlay Sheekh Maxamed Cabdi Umal xilli uu ku sugnaa masjid ku yaala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi dalka Kenya, taasi oo sababtay in qoraaga mar kale sharaxaad ka bixiyo buuga uu soo saaray kuna dardaarmay haddii dhibaato ku timaado naftiisa inuu mas’uul ka yahay Sheekh Umal.
Qoraaga waxaa kale oo uu sheegay in durba uu saameyn ku yeeshay hadaladii Sheekh Umal ka sheegay buugiisa isla markaana dadkii iska lahaa Hotelkii uu ka degenaa Nairobi ay ka dalbadeen inuu isaga guuro, taasi oo muujineysa khatarta ka dhalan karta dooda dhinaca diinta la xariirta ee uu Sheekh Umal ku ifiyay qoraaga Cabdi Siciid Cabdi Ismaaciil.
Soomaalidu waxay tiraahdaa “Gari laba nin kama wada qosliso” balse ma aha ujeedada qormadeydaan inaan ku difaacayo Sheekh Umal ama qoraaga Buugga, bacdamaa ay isku heystaan arrimo ku saabsan diinta Islaamka iyo mas’alooyinka ku soo arooray Shareecada Islaamka oo loo baahan yahay in si cilmi iyo caqli ku jiro loogu kala saaro.
Runtii waxaan qof kasta oo Soomaali ah daah ka saarneyn in caqabadaha ugu waaweyn ee dalkeena burburka ku keenay ay ka mid tahay arrimaha diinta oo saldhig u noqday dib u dhaca dalkeena ragaadiyay ee sababay in kumanaan ruux la aaso, malaayiin qoysna ay ku barakacaan isla markaana ilaa maanta xaaladeenu murugsan tahay loona la’yahay xal rasmi ah.
Haddaba akhristow hadaan soo koobo ujeedka labada aqoonyahan wuxuu gaaray in qof Islaam ah oo aanay jirin meel uu uga baxay diinta Islaamka la gaaleysiiyo, marka la eego dulucda iyo qiimeynta hadaladii kululaa ee uu Sheekh Umal sheegay isla markaana u hadlay sida Mufti Soomaali dooratay oo kale, iyadoo la ogyahay in waxyaabaha maanta la isku hayo dalka Soomaaliya ee ay ka mid tahay dooda diinta Islaamka.
Qoraaga Buuga Cabdi Siciid Cabdi Ismaaciil oo qoray “Xadka ridada maxaa ka run ah?” ee dhaliyay dooda diimeed, ayaan iyaduna wax indhaha laga qarsan karin ah ereyada culculus ee uu isticmaalay iyo ereyada xanafta leh ee uu meel uga dhacay wadaadada oo haba yaraatee aanu kala soocin, iyadoo murtida buugga laga dhadhansan karo nacaybka gaamuray ee uu u qaaday, hase yeeshee wuxuu ku saxsanaa in Soomaaliya dhibaatada maanta heysataa ay wadaadada.
In qof la gaaleysiiyo ma aha wax sahlan, hase yeeshee Sheekh Umal wuxuu ku fududaaday naqdinta buugaasi, ayna ahayd haddiiba buuggaasi dhaawacayo diinta Islaamka iyo xukunada Islaamku ka aaminsan yahay qofka ka baxa diinta Islaamka inuu u kaashado Culumaa’udiinka ugu magaca weyn dalka oo Fatwadu ay noqoto mid ka soo baxday Mashaa’iq iyo diin fidiyayaal matali kara Culumada Soomaaliyeed.
Qoraaga Cabdi Siciid Ismaaciil waa dardaarmay, hase yeeshee xilliga ay ku timaado tii Alle daqiiqad looguma darayo, xitaa haddii dilkiisa ay sabab u noqoto oraah ka soo baxday afka Sheekh Umal, waxaana halkaan fariin uga dirayaa qoraaga buugga “Xadka ridada maxaa ka run ah?!!”, anigoo ku boorinaya inuusan muujin wax cabsi iyo welwel ah isla markaana uu ku kalsoonaado qadarta Alle SWT.
Walaalkey Cabdi Siciid Ismaaciil waxaad ogaataa in dalka Soomaaliya muran diimeed iyo fikir lagu lamaaninayo diinta Islaamka oo koox is xejineysa ay ku dhammaadeen boqolaal ruux, isla markaana ay ku barakaceen ama dalkooda uga haajireen kumanaan qoys cabsi ay ka qabaan kooxaha xagjirka diimeed xambaarsan ee xilligoodu sii dhacayo.
Cambaareynta iyo gaaleysiinta Sheekh Umalna aanay ka tarjumeynin Fatwo ka soo baxday culimada Soomaaliyeed iyo mashaa’iqda caanka ah ee ku caan baxay fidinta diinta Islaamka, balse aad ka soo qaado ra’yi fasir diimeed oo qaldan ka soo baxay mid ka mid ah Sheekh isagaba ka barakacay gurigiisa (Dalkiisa) ee megen u ah Dowladda Kenya oo dalka ku maamusha dastuur.
Eedeynta Sheekh Umal uu u jeedinayo qoraaga marka dhinaca kale laga eego ma aha mid Shareecada Islaamka ay soo dhoweyneyso, waayo marka qof la gaaleysiinayo waxaa jira shuruudo fara badan oo Mufti ay doorteen inta badan dadka Soomaaliyeed, taasina hadda meesha ma taallo haddii taas la waayana go’aanada noocaas ah ee gaaleysiinta ah waa inay ka soo baxdo Culumada Soomaaliyeed ee wax ku oolka ah.
Soomaalidu waxay tiraahdaa “Hadal waa mergo oo kale hadba meel u jiidma” waxaan kugula talinayaa qoraa Cabdi Siciidoooow intii aad qori lahayd buugga noocaan oo kale inaad ka door biddo howlo kale, bacdamaa gacantaasi ay sababi karto in boqolaal ruux naftooda ku waayaan isla markaana sii damqinaya dhaawaca gaaray gocashada dhiig joojinta loo la’yahay ee maanta hareysay dalkeena.
« Ciise Axmed Cumar “Waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno sidii dadka Soomaaliyeed loogu dhiiri gelin lahaa inay gaaraan yoolkooda sanadka 2016″
Edmonton Somali group speaks out after reports of ISIS recruiting its youth »